हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?
शारदा शर्मा – आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो । असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा ल’तार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २६ बर्षीया शारदा शर्मा । *******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’***,
जिविसकै प्रां’गनमा आएको बेला उनीलाई एउटा फोन आयो । फोनमा पाएको सान्त्वना र ढा’डसले शारदाको मुहार अलि परिवर्तन भयो । बुझदै जाँदा त्यो फोन गर्ने तत्कालीन रुकुम जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डिएसपि हाल एसपि किसन सिह थापा हुनुहुँदो रहेछ ।मेरो सोधिखोजी पछि डिएसपी थापाले मलाई उक्त शारदा बहिनिको बारेमा सबै बताउनुभयो । बेला बेला उनलाई पढाई खर्च समेत सहयोग गर्दै आउनु भएका थापाको समन्वयमा शारदा सग मैले भेट गरे । म त्यति बेला अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक र दि हिमालयन टाइम्समा संवाददाता थिए । मैले उनको संघर्षबारे स्टोरि तयार गरेर प्रकाशनका लागि पठाए । स्टोरी छापिए पछि विभिन्न ठाउँवाट आएको रकमले उनलाई केही सहयोग पनि भयो । -हाम्राखबरबाट
सुशांतलाई न्याय दिने अभियान जारी, सबै अभियानकर्तालाई दिदी श्वेताले दिईन् यसरी धन्यबाद